Ulf Kristersson: Howlo ballaaran ayaa hor yaala xubnaha xisbiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna Ulf Kristersson oo ka hadlaya shirkii howleed ee xisbiga. sawir: Kicki Nilsson/TT
Ulf Kristersson: Howlo ballaaran ayaa hor yaala xubnaha xisbiga
Xisbiga Moderaterna oo siyaasadda ka wada xaajoonaya
La cusbooneeyay torsdag 12 oktober 2017 kl 14.45
La daabacay torsdag 12 oktober 2017 kl 13.01
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna Ulf Kristersson wuxuu ku dhiiri-geliyay xubnaha xisbiga uu hoggaankiisa hayo in ay hor yaalaan howlo adag, mar uu khudbaddiisii ku furayay kulanka xisbiga uga furmay maanta magaalada Örebro.
Muddo bilo ah oo ey xubnaha xisbiga Moderaterna ku howlanaayeen is jiid jiid dhexdooda ah iyo hoggaamiyihii xisbiga oo xilkii iska casilay ayey iminka u soo jeesteen in laga wada xaajoodo siyaasadda.
–Caqabada na heysataa ma ahan mid si kedis ah ku bilaabatay, habeen keliyana laguma xalin karo. Waxaa na hor yaala howlo aad u culus iyo sidii kalsoonida shacabka dib loogu kasban lahaa, sida uu khudbaddiisii ku sheegay Ulf Kristersson.
Qiyaastii 200 oo xubnood oo kala matalaya laamaha iyo hoggaanka xisbiga ayaa kulan isugu yimid looga wada xaajooneyo siyaasadda uu xisbiga M ku geli doono doorashada dhici doonta sannadka foodda innagu soo haya.
Khudbaddiisii furitaanka ayuu Kristersson ku sheegay inay rajadiisu wanaag-san tahay, hase yeeshee uu carrabka ku adkeeyay inay hor yaalaan howlo adag sidii mustaqbalka loo dhisi lahaa kalsoonida shacabku u hayo xisbiga.
–Waxaanse iminka dareen-sanahay inay deggenaansho iyo rajo ballaaran ka dhex jirto xisbiga gudihiisa. Waana mid hareeyn doonta kulanka iyo sidoo kale rabitaanka ah sidii caqabadaha na hor yaala wax looga qaban lahaa iyo doorashada oo aannu ku guuleeysanno, sida uu sheegtay Elisabth Svantesson, ku simaha labaad ee xisbiga Moderaterna, ahna af-hayeenka dhanka dhaqaalaha.
Ulf Kristersson ayaa sidoo kale khudbaddiisa uga faa’iideeystay inuu weerar afka ah ku qaado madaxa dawladda Stefan Löfven (S).
-Waa in dib u habeeyn lagu sameeyaa nidaamka hab-nololeedka Sweden si aannu u engegin oo aan madxaf loo dhigin lagu daawado guulihii dalku horay u gaaray, sida uu sheegay.
-Hoowshaa maahan mid uu Stefan Löfven qaadi karo, waana sababta uu dalkani ugu baahan yahay hoggaaminta xisbiyada garabka midig ee Alliansen.
Kulan howleedka xisbiga Moderaterna ayaa maanta albaabbada loo furey, wuxuuna socon doonaa muddo afar maalmood ah illaa iyo maalinta axadda ee foodda innagu soo haysa.
Xisbiga Moderaterna oo xoogga isugu geeynaya shir weynihiisa